Etu ị ga -esi merie ịgba alụkwaghịm dị egwu | Bezzia
Etu ị ga -esi kwụsị ịgba alụkwaghịm
Maria Jose Roldan | 11/10/2021 22:37 | Mmekọrịta
Ịgba alụkwaghịm nwere ike ịdị ka ọnwụ na dịka nke a, Ị ga -agafe usoro iru uju iji merie ụdị nsogbu a. Ọ bụ ọbịbịa ikpeazụ nye onye ị hụrụ n'anya na ndụ nrọ na ọdịnihu. Ọ bụ ya mere ịgba alụkwaghịm nwere ike bụrụ ezigbo nsogbu maka ọtụtụ mmadụ.
N'isiokwu na -esonụ, anyị ga -agwa gị otu esi emeri iru uju nke ịgba alụkwaghịm na inwe ike ịmalite ndụ ọhụrụ n'ụzọ dị otu a.
Ị ga -amalite site na ntọala, na ọ dịghị ịgba alụkwaghịm abụọ bụ otu na ihe kpatara ya nwere ike ịdị ọtụtụ ma dịkwa iche iche. N'ihe banyere ịme mkpebi siri ike dị otu a, ọ dị mma ịgbaso usoro ndụmọdụ na -eme ka usoro nkewapụ na nke onye ị hụrụ n'anya dị mfe nnagide:
Nke mbụ na nke kacha mkpa bụ ịnakwere ịgba alụkwaghịm ahụ. Ọ bụ ihe dị mma na ọ na -adịkarị na ọ na -efu na mbụ, ebe ọ pụtara ịhapụ nrọ na atụmatụ agaghị emezu ọzọ. Ọ bụrụ na enweghị ike idozi ihe, ọ baghị uru ịghara ịnakwere eziokwu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike isi ike ma nwee mmerụ ahụ, ọ kacha mma ịnakwere ịgba alụkwaghịm ahụ ma ghara imekwu ihe ọzọ.
Onye ahụ ekwesịghị ikewapụ onwe ya wee gbalịa wughachi ndụ ya. N'ịga ụdị ihe isi ike dị otú a, ọ bụ ihe amamihe ka gị na ndị mmadụ nọrọ inwe ike ikwupụta mmetụta na mmetụta dị iche iche.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume, ọ dị mkpa ilepụ anya n'ihu na lee ndụ nwere nnukwu nchekwube. Ka oge na -aga, nrọ na atụmatụ ọhụrụ ga -apụta ọ bụrụgodị na onye a hụrụ n'anya anọghị ya.
Ọ dị mma ịmụta ihe site n'ihe ndị mehiere ka anyị wee nwee ike ịnụ ụtọ ndụ ọzọ. Ahụmịhe bụ ogo na ị ga -enweta akụkụ dị mma site n'ịgba alụkwaghịm.
Iji nwee obi ụtọ, ịkwesighi inwe onye gị na ya ga -eso nwee ụdị mmetụta a. Ị ga -amụta ka esi amụta ịnọ naanị gị ma ghara ịdabere n'ebe onye ọzọ nọ ma a bịa n'ịchọta obi ụtọ.
Ọ bụrụ na n'agbanyeghị ihe niile ekwuru, ị ka ga -akwụsịli ịgba alụkwaghịm ahụ, ọ bụghị ihe ọjọọ ịchọ enyemaka n'aka onye ọkachamara. Onye dị ka ọkà n'akparamàgwà mmadụ nwere ike inyere gị aka ijikwa mmetụta dị iche iche. Mgbe a bịara n'inwe ike imeri oge siri ike dịka ịgba alụkwaghịm nke onye a hụrụ n'anya, ọ dị mkpa ịmara ka esi enyefe mmetụta dị iche iche oge niile.
Na nkenke, Ọ dịghị mfe ma ọ bụ dị mfe ịgabiga ịgba alụkwaghịm nke onye ị hụrụ n'anya. Ọ dị mkpa ịmata ihe kpatara mmekọrịta ahụ ji na -etisa ma site ugbu a gaa n'ihu, mee ihe niile kwere omume ka usoro iru uju ghara ịdị ogologo. Enwere ọtụtụ ndị na -atụgharị ịgba alụkwaghịm ka ọ bụrụ ezigbo trauma nke siri ike ịpụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ahụ enweghị ike imeri ịgba alụkwaghịm ahụ n'onwe ya, a na -amanye ha ịchọ enyemaka n'aka onye ọkachamara iji nyere ha aka imeri oge ihe isi ike dịka ịwụsa onye mmekọ ha ruo mgbe ebighi ebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Etu ị ga -esi kwụsị ịgba alụkwaghịm
Achịcha brownie nwere dulce de leche na cinnamon
Echiche iji nnukwu piano chọọ ụlọ gị mma